Tayada Been abuurka PCB - Pandawill Technology Co., Ltd.
Tayada ayaa ah waxa aan ka walwalsanahay. Si loo helo badeecada ugu tayada fiican iyo gebi ahaanba qancinta codsiyada macaamiisha ayaa si adag ugu xidhan maskaxda qof kasta oo jooga Pandawill. Tani waxay bilaabmaysaa sida ugu dhakhsaha badan ee xogtaadu timaaddo waxayna socotaa ilaa adeegga iibka kadib. Xakamaynta tayada ayaa inta badan ka kooban saddex qaybood:
Nidaamkani waa in lagu xakameeyo alaab-qeybiyeyaasha, hubinta qalabka soo galaya, iyo la tacaalidda dhibaatooyinka tayada ka hor soo-saarka.
Alaab-qeybiyeyaashayada ugu waaweyn waxaa ka mid ah:
Khad: Nanya, Taiyo.
Xakamaynta Tayada Hawsha iyo Tijaabada
Laga bilaabo diyaarinta wax-soo-saarka wax-soo-saarka (MI), iyada oo loo marayo hubinta nidaamka, illaa kormeerka ugu dambeeya, xakamaynta tayada ee guddiga wareegga daabacan ee la dhammaystiray waa mawduuc soo noqnoqday iyada oo loo marayo dhammaan nidaamka wax soo saarka.
In kasta oo kalsoonida iyo saxsanaanta tilaabooyinka kiimikada iyo farsamaynta lagu xaqiijinayo falanqaynta dukumiintiga ah inta lagu gudajiro geedi socodka oo ay weheliso talaabooyinka dayactirka, guddi kasta oo wareeg ah si kastaba ha noqotee waxay ku xiran tahay tijaabooyin dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah Tani waxay hubineysaa in ilaha suurtagalka ah ee khaladaadka si dhakhso leh loo ogaan karo loona xallin karo si joogto ah. Boodhadhka wareegga ayaa laga hubin doonaa shuruudaha sare ee heer caalami ee IPC-A-6012 ee caalamku aqoonsan yahay.
Hubinta & baaritaanka waxaa ka mid ah:
> Hubinta xogta macaamiisha (DRC - Hubinta Sharciga Naqshadeynta)
> Tijaabinta elektarooniga ah: Muga yar oo lagu hubiyey baadhitaan duulaya iyo taxaneyaal waaweyn iyadoo la adeegsanayo Raktanka E-Test.
> Kormeerka Aaladda Iswada: wuxuu xaqiijinayaa sawirka raadiyaha dhammaystiran ee dhammaystirka ka leexashada Gerber oo wuxuu helaa khaladaad laga yaabo in tijaabada E-ma ogaan karto.
> Raajo: cadee oo sax qaxa lakabka iyo daloolinta godadka cadaadiska.
> Goynta qaybaha falanqaynta
> Imtixaannada shoogga kuleylka
> Baadhitaannada microscopic
> Imtixaanada korantada ee ugu dambeeya
Tani waa geedi socodkii ugu dambeeyay kahor intaan alaabtu u rarin macaamiisha. Waa wax kasta oo muhiim ah si loo hubiyo in rarkeenu aanu cillad lahayn.
Nidaamyada waxaa ka mid ah:
> Kormeerka ugu dambeeya ee muuqaalka ah ee looxyada wareegga
> Xirxiraha Vacuum oo ku shaabadee sanduuqa gaarsiinta.